आधारभूत कम्प्युटर कौशल | USAHello | USAHello
आजको संसारमा, हामी सबै कम्प्युटर र अन्य प्रविधि प्रयोग गर्न आवश्यक. कम्प्युटरलाई काम पाउन मदत र मित्र र परिवारका साथ जडान गर्न सक्नुहुन्छ. यो पृष्ठ आधारभूत कम्प्युटर सीप प्राप्त लागि केही स्रोतहरू समावेश.
कम्प्युटरमा कसरी प्रयोग गर्ने थाहा यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ. सबैभन्दा कम्पनीहरु तपाईं अनलाइन लागि जब लागू गर्न चाहनुहुन्छ. तपाईं इमेल मार्फत आफ्नो साथी र परिवारलाई कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, कुराकानी, र भिडियो. तपाईं चाहनुहुन्छ जानकारी कुनै प्रकारको पाउन सक्नुहुन्छ. त्यहाँ जहाँ तपाईं निःशुल्क आधारभूत कम्प्युटर सीप सिक्न सक्छौं इन्टरनेटमा धेरै ठाउँ हुन्.
यी दुई सबै भन्दा राम्रो हो, मुक्त, कम्प्युटर कौशल वेबसाइट हामी अनलाइन फेला.
डिजिटल जान्नुहोस् तपाईं कम्प्युटर Basics र इन्टरनेट कौशल सिक्न मदत गर्न धेरै कक्षाहरू छ. तपाईं एक कम्प्युटर विभिन्न भागहरु र सञ्चालन प्रणाली सिक्न सक्नुहुन्छ. अपरेटिङ सिस्टम कार्यक्रम आफ्नो कम्प्युटर रन मदत छन्. त्यहाँ इमेल कसरी प्रयोग गर्ने बारे कोर्स हो.
इन्टरनेटमा सुरक्षित रहेको महत्त्वपूर्ण छ. तपाईं होसियार भएनौं भने, आफ्नो व्यक्तिगत जानकारी इन्टरनेटमा चोरी प्राप्त गर्न सक्छन्. कोही आफ्नो पैसा खरीद गर्न यसलाई प्रयोग गर्न सक्छ. तपाईं कसरी आफ्नो जानकारी निजी राख्न र ठगी जोगिन सिक्न कक्षाहरू लिन सक्छ. अन्य कक्षाहरू तपाईं मान्छे जडान गर्न सिकाउन र कसरी अनलाइन दोकान हुनेछ.
डिजिटल जान्नुहोस् पाठ पालना गर्न सरल छन्. जस्तै, तिमी सक्छौ एलकमाउन कसरी गर्न इन्टरनेटमा सुरक्षित रहन. वा तपाईंले कसरी सिक्न सक्नुहुन्छ माइक्रोसफ्ट वर्ड कागजातहरू सिर्जना र बचत.
GCFLearnfree धेरै ठूलो अनलाइन तपाईं कम्प्युटर सिक्न मदत गर्न पाठ्यक्रम र भिडियोहरू छ. तपाईं विभिन्न भागहरु छन् के तपाईँको कम्प्युटरमा कसरी स्थापित गर्ने र सिक्न सक्छौं. को कक्षाहरू कसरी कागजातहरू बचत गर्न बारेमा कुरा र कहाँ तिनीहरूले जब तपाईं जाने. अन्य कक्षाहरू इन्टरनेट कसरी प्रयोग गर्न र आफ्नो कम्प्युटर राम्रो हेरचाह गर्दै हुनुहुन्छ. र तिनीहरूले पनि छ इन्टरनेट सुरक्षा कक्षाहरू.
कम्प्युटर को विभिन्न भागहरु बताउँछन् एक GCFLearnfree.org भिडियो हेर्न
Gmail कसरी प्रयोग गर्ने बारे अर्को भिडियो हेर्न
इन्टरनेट सुरक्षा बारे छोराछोरीलाई सिकाउन
आफ्नो बच्चा इन्टरनेट सुरक्षा बारे थाहा लागि यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ. तिनीहरूलाई मानिसहरूलाई कुरा को खतराबाट बुझ्न मदत गर्नेछ तिनीहरूले इन्टरनेटमा थाहा छैन. NetSmartz.org संग इन्टरनेट सुरक्षा बारे छोराछोरीलाई सिकाउन.
तपाईं नजिकै एक वर्ग फेला
तपाईं एक वर्ग जान रुचि थियो? तपाईं एक कठिन समय भइरहेको छ भने आफै सिक्दै, यो एक शिक्षक गर्न राम्रो हुन सक्छ! सबैभन्दा सार्वजनिक पुस्तकालयहरु निःशुल्क कम्प्युटर कक्षाहरू तपाईं धाउन सक्नुहुन्छ छ. आफ्नो निकटतम पुस्तकालय फेला वा खोज FindHello तपाईं नजिकै वयस्कहरूको लागि कम्प्युटर कक्षाहरू पाउन.
काम प्रशिक्षण कार्यक्रम फेला
अनलाइन अंग्रेजी कुराकानी र व्याकरण सिक्न
तपाईं नजिकै मदत पाउन
आफ्नो शहर मा सेवा र स्रोतहरू खोजी गर्न FindHello प्रयोग.
तपाईंको खोजी सुरु